ငြိမ်းဝေ: ပိတောက်တွေလှိုင်တဲ့နှစ် ခမေါက်တွေနိုင်တဲ့ခေတ်
ကျနော်တို့ လူစု ခမောက်ကြီးအောက်တွင် ဝိုင်းစုပြီးထိုင်နေကြသည်။ခမောက်ကြီးမှာ လူ သုံးဆယ်ခန့် ထိုင်နေကြသည့်တိုင် လုံခြုံသည့်အမိုးဖြစ်နေသေး၏။ ခမောက်ကြီးအောက်တွင် ထိုင်နေရင်းက ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးခင်မောင်ဝင်းကို ကျနော်တွေးမိသည်။ သူက အကြံကောင်း၏။ ဝါးခမောက်ကြီးတခုကို ယာယီတဲ၏အမိုးအဖြစ်တင်ထားရန် စိတ်ကူးခဲ့သူဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ အဖွဲ့ ချုပ်၏ ရွေးကောက်ပွဲသင်္ကေတမှာ ခမောက်ဖြစ်သည်။ ထို့ ကြောင့် ယာယီတဲ၏အမိုးအဖြစ် ဝါးခမောက်ကြီးတခုလုပ်ပြီးတင်ထားရန် စိတ်ကူးခဲ့သူ ဦးခင်မောင်ဝင်း၏အကြံကိုပြန်တွေးကာ ကျနော် ပြုံးမိသည်။
ဝါးခမောက်ကြီးမိုးထားသည့် စည်းရုံးလှုံ့ ဆော်ရေးယာယီတဲမှာ မဲရုံနှင့် ကိုက်(၁၅၀) အကွာခန့် တွင်ရှိသည်။ မဲရုံနှင့်ကိုက်(၁၀၀)အတွင်း မဲဆွယ်စည်းရုံးခြင်းမပြုရဟူသည့် ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေအရ ကျနော်တို့ က မဲရုံနှင့်ကိုက်(၁၅၀)အကွာခန် အကွာ ဥပဒေနှင့်လွတ်ကင်းသည့်နေရာ့တွင် မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးယာယီတဲထိုးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြ၏။ တဲရှေ့ လက်ခုပ်တဖေါင်အမြင့်တွင် “ပိတောက်တွေလှိုင်တဲ့နှစ် ခမောက်တွေနိုင်တဲ့ခေတ်” ဟု ရေးထားသည့်ပိုစတာကြီးကို တဲ၏နဖူးစီးအဖြစ်ထောင်ထားလိုက်၏။ ကျနော်တို့ က တဲရှေ့နှင့် တဲအောက်တွင် ခုံတွေချကာ ထိုင်ကြသည်။ တဲရှေ့ မှဖြတ်ကျော်ကာ မဲရုံသို့ သွားကြသော မဲလာပေးသူများ ကို နှုတ်ဆက်ကြ မျက်နှာပြကြရသည်။ သို့ သော် ယခင်နေ့ များလိုတော့ အဖွဲ့ ချုပ်စည်းရုံးရေးစကားများကို ဓါတ်စက်နှင့်မပြောမဟောကြတော့ပဲ တဲအောက်တွင် ရေနွေးကြမ်းသောက်ရင်း အေးဆေးစွာထိုင်ကြ၏။ မဲထည့်မည့်နေ့ တွင် မည်သည့်ပြဿနာမျှမပေါ်ပေါက်စေရန် ဆူဆူညံညံပြောဟောစည်းရုံးသည့်အလုပ်ကို ရပ်ထားလိုက်ကြ၏။
“ကျနော်တို့ နိုင်မှာကတော့ သေချာသလောက်ပဲ၊ ဒါပေမယ့် ရှေ့ ဘာတွေဖြစ်လာအုံးမလဲဆိုတာ ကျနော်တွေးလို့ မရဘူး၊ ကျနော်ကတော့ ရွေးကောက်ပွဲဟာ ပြဿနာအားလုံးကိုပြေလည်သွားစေမယ့်ကိစ္စလို့ တော့ ကျနော်မယုံကြည်မိဘူး”
ဦးခင်မောင်ဝင်း က မည်သူ့ ကိုမျှမကြည့်ပဲ မြေကြီးပေါ်ကို ခေါင်းငုံ့ ပြီး စိုက်ကြည့်နေသည်။ ကျနော်ပြောလိုက်သည့်စကားကိုမူ ခေါင်းငုံ့ ပြီးနားထောင်သည်မှအပ မည်သို့ မျှရုတ်တရက်ပြန်မပြောပဲနေခဲ့၏။
ဤ လေးငါးဆယ်ရက်အတွင်း ဦးခင်မောင်ဝင်း၏မျက်နှာမှာ သိသိသာသာ ချောင်ကျသွား၏။ နေ့ စဉ်ရက်ဆက် နယ်လှည့်ပြီး စည်းရုံးရေးဆင်းခဲ့ရသဖြင့် သူ့ မှာ အစားမှန် အအိပ်မှန်မရှိခဲ့။ နေလောင်ထားသည့် သူ့ နဖူးပြင်မှာ အညိုရောင်သန်းနေလေသည်။ အမြဲတန်းလိုလို သန့် ပြန့် သပ်ရပ်စွာ ဝတ်စားနေထိုင်တတ်သူဖြစ်သည့်တိုင် ဤရက်များအတွင်း၌သူသည်ဘိုသီဘတ်သီဝတ်စားသွားလာနေသည်ကို တွေ့ ခဲ့ရ၏။
“ဆရာပြောတာ ကျနော်နားလည်ပါတယ်၊ ကျနော်လည်း အချိန်တိုင်းလိုလို ဒါကိုပဲစဉ်းစားနေရတာပဲ၊ စည်းရုံးရေးဆင်းနေတဲ့တချိန်ထဲမှာ ငါတို့ နိုင်မှာကတော့ သေချာသလောက်ပဲ၊ ဒါပေမယ့် ရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့အခါ ဆိုပြီးဆက်တွေးမိရင် ကျနော့်ရင်ထဲ တကယ်မရှင်းဘူး”
ကျောင်းဆရာဟောင်းဖြစ်သူ ကျနော့်ကို ဦးခင်မောင်ဝင်းက ဆရာဟူသောနာမ်စားဖြင့် သာခေါ်ဝေါ်ပြောဆိုတတ်၏။ သူနှင့်ကျနော်က အသက်ချင်းမတိမ်းမယိမ်း။ သူက ရဲဝန်ထမ်းဟောင်းတဦး။ ကျွဲပွဲမြို့ ရဲစခန်းတွင် စခန်းမှူးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖူးသူ။ အလုပ်မှဆေးပင်စင်နှင့်ထွက်ပြီးနောက် သစ်အရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်းလုပ်ရင်း နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲ ခြေစုံပစ်ဝင်လာခဲ့သူ။ ၁၉၈၈ ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံကြီးဖြစ်တော့ သူက ကျွဲပွဲမြို့ သပိတ်ခေါင်းဆောင်။ ကျနော်က စစ်တောင်းမြစ်ကမ်းဘေး ကျေးရွာသပိတ်စခန်း အမာခံတဦး။ အရေးတော်ပုံကာလနောက်ပိုင်း အုတ်တွင်းမြို့ နယ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်တွင် အချိန်တိုင်းလိုလို သူနှင့်ကျနော် အတူတွဲပြီး အလုပ်လုပ်ခဲ့၏။ သူက မြို့ နယ် စည်းရုံးရေးကော်မီတီဥက္ကဌ။ ကျနော်က မြို့ နယ် ပြန်ကြားရေးနှင့်သုတေသနဌါနတာဝန်ခံ။ သူက ရဲဝန့် ပြတ်သားစွာ အလုပ်လုပ်တတ်သူ။ ကျနော်က ရှင်းလင်းဆွေးနွေး ဝါဒဖြန့် ချိရေးကို စိတ်အားထက်သန်သူ။ သူနှင့်ကျနော် ကျေးရွာတွေဆင်းခဲ့ကြသည်။ အခန်းအနားတွေလုပ်ခဲ့ကြသည်။ စာရွက်တွေ ဝေခဲ့ကြသည်။
“ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကျနော်တို့ အလုပ်တွေ ဆက်လုပ်ကြရမှာပဲ၊ ကျနော့်စိတ်ထဲ ဆရာ့လိုပဲ မတင်မကျသဘော၊ မဝေခွဲတတ်တဲ့သဘော၊ မရှင်းလင်းတဲ့သဘောတွေ ရှိနေပေမယ့် ပါတီလုပ်ငန်းတွေကိုတော့ မဖြစ်မနေဆက်လုပ်ကြရမှာပဲမို့ လားဆရာ၊ ပြီးတော့ ရွေးကောက်ပွဲ ရှိသည်ဖြစ်ပစေ မရှိသည်ဖြစ်ပစေ ပါတီကတော့ရှိကိုရှိနေရမှာပဲမို့ လား၊ ဒါဆိုရင် သံသယတွေနောက်တန်းမှာထား လုပ်စရာရှိတာ လုပ်ကိုလုပ်ကြရတော့မှာပဲပေါ့၊ ဒီလိုတွေးလိုက်မှပဲ ရင်ထဲမှာပေါ့သွားတယ်လို့ ကျနော်ထင်မိတယ်”
မဲရုံက မဲပေးပြီးပြန်လာကြသည့် အမျိုးသမီးကြီးတအုပ်က ခမေါက်တဲကြီးရှေ့ ရောက်ကာမှ “ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အသက်ရာကျော်ရှည်ပါစေ” ဟု သံပြိုင်အော်ဟစ်လိုက်ကြ၏။ ကျနော်တို့ က လမ်းပေါ်က သူတို့ လူအုပ်ကို ညာသံပေးကာ တုန့် ပြန်နှုတ်ဆက်လိုက်ကြသည်။
နေ့ တဝက်ကျော်လာခဲ့ပြီ။ မဲရုံရှေ့ တွင် မဲပေးသူ ပိုများလာသည်ဟုထင်မိသည်။ မဲပေးလာသူ အားလုံးလိုလိုက ကျနော်တို့ ကို နှုတ်ဆက်သွားကြသည်။ တချို့ က ကျနော်တို့ နှင့်ခဏတဖြုတ်အတူတွဲပြီးထိုင်သွားကြ၏။ တချို့ က ခမောက်တဲကြီးနောက်ခံထားကာ အမှတ်တရ ဓါတ်ပုံများပင် ရိုက်ကြ၏။
“ဟော ဦးခင်မောင်ဝင်းတော့ ရောက်လာပြီဗျို့ ”
ခမေါက်တဲကြီးဆီ လွယ်အိပ်တလုံးလွယ်ကာ လျောက်လာနေသည့် ဦးခင်မောင်ဝင်းကို ကျနော်တို့ အားလုံးက ဝမ်းသာတက်ကြွစွာ ကြိုဆိုလိုက်ကြသည်။
“ဘယ်လိုလဲ အခြေအနေကောင်းရဲ့လား၊ ဟိုမှာတော့ အားလုံးကောင်းပါတယ်၊ ခမောက်နဲ့ နှဲ အတူတူပဲဆိုပြီး အပင်ပမ်းခံ လိုက်ရှင်းထားတာ တော်တော်ထိရောက်သွားတယ်”
ဦးခင်မောင်ဝင်းက ခမောက်တဲကြီးကို သဘောကျသလိုမေါ့ကြည့်ရင်း တဲရှေ့ တွင် လာပြီးရပ်လိုက်သည်။ ကျနော်က အခြေအနေကောင်းသည်ဟု ယူဆရကြောင်း မည်သည့်ပြဿနာမျှမရှိကြောင်း ပြန်ပြောပြလိုက်၏။
ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းက ကျနော်တို့ မဲဆွယ်စည်းရုံးရာ ခမေါက်တဲကြီးဆီ ဦးခင်မောင်ဝင်း ရောက်မလာနိုင်ခဲ့ပါ။ သူက အုတ်တွင်းမြို့ မဲရုံဆီ အစေါကြီးထသွားရ၏။ အုတ်တွင်းမြို့အမှတ်(၁)မဲဆန္ဒနယ်၊ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် ကျနော်တို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်က ဝင်မပြိုင်ခဲ့ပါ။ ဗဟိုမှ ညှိနှိုင်းချက်အရ အဖွဲ့ ချုပ်၏ အသက်ကယ်ပါတီမှ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသိန်းဝင်းက ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်၏။ ထို့ ကြောင့် နယ်ခံဖြစ်သူ ဦးခင်မောင်ဝင်းက ယင်းပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးသိန်ဝင်းအတွက် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရန် မြို့ နယအဖွဲ့ ချုပ်ရုံးသို့ အစေါကြီးသွားနေခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။
အမှန်တကယ်အားဖြင့်မူ သူသည် သူ့ အတွက် မဲဆွယ်စည်းရုံးသည့်အလုပ်ထက် ဗဟုိမှ ချပေးသည့် အသက်ကယ်ပါတီ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအတွက် မဲဆွယ်စည်းရုံးသည့်အလုပ်ကို ပိုပြီးအချိန်ပေးခဲ့၏။ အဖွဲ့ ချုပ် အသက်ကယ်ပါတီ၏ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လေါင်းဦးသိန်းဝင်းမှာ နယ်မြေခံမဟုတ်။ လူသိနည်းသူလည်းဖြစ်သည်။ အဖွဲ့ ချုပ်အသက်ကယ်ပါတီ၏ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာသင်္ကေတမှာ “နှဲ” ဖြစ်သည်။ ထို့ ကြောင့် ခမောက်ကလွဲ မည်သူ့ ကိုမှ မဲမပေးဟုဆန္ဒပိုင်းဖြတ်ထားသည့် မြို့ နယ်လူထုကို “ခမောက်နှင့်နှဲ အတူတူပဲ” ဟု ရှင်းလင်းလှုံ့ ဆော်ကာ ဦးခင်မောင်ဝင်းကဦးဆောင်လျက် နေ့ မအားညမအား စည်းရုံးရေးဆင်းခဲ့ရ၏။ (မှတ်ချက်။ ။ ယင်းအသက်ကယ်ပါတီ၏ဥက္ကဌမှာ ယခုအခါ အဝေးရောက်အစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာသူ ဒေါက်တာစိန်ဝင်းဖြစ်ပါသည်။) ယခုလည်း သူ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရသည့် မဲဆန္ဒနယ်မဲပေးသည့်နေ့ ဖြစ်သည့်တိုင် သူက မြို့ နယ်ရုံးသို့ သွားကာ အသက်ကယ်ပါတီပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအတွက် ဝိုင်းဝန်းကူညီနေခဲ့ရ၏။ နေ့ လည်ပိုင်းကြမှသာ ကျွဲပွဲသို့ ပြန်ရောက်လာခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုနေ့ က အုတ်တွင်းမြို့ နယ် အမှတ်(၂)မဲဆန္ဒနယ်မှ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သည့် ဦးခင်မောင်ဝင်းက (၈၀)ရာခိုင်နှုန်းကျော် မဲအပြတ်ရရှိကာ အနိုင်ရရှိခဲ့၏။ ဤမဲဆန္ဒနယ်တွင် ဦးခင်မောင်ဝင်းနှင့် အဓိကဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည့်ပုဂိုလ်မှာ တချိန်က မဆလပါတီ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်ခဲ့သူ ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းရီဖြစ်သည်။ သူက တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီကိုယ်စား လှယ်အဖြစ်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
မဲပေးသည့်နေ့ က မဲရုံပိတ်ကာနီးအချိန်တွင် ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းရီနှင့်အဖွဲ့မဲရုံသို့ကား(၄)စီးဖြင့် ရောက်လာခဲ့၏။အခြွေအရံများခြံရံလျက် မဲရုံအတွင်းသို့ ဝင်လာခဲ့၏။ မဲရုံမှူးနှင့် မဲရုံဝန်ထမ်းများက တရိုတသေကြိုဆိုကြရ၏။ ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းရီနှင့်အဖွဲ့ မဲရုံအတွင်း ဆယ်မိနစ်ခန့် နေသွားသည်ကို မဲလာပေးသူအားလုံးမြင်၏။ မဲပုံးများထားရာ အခန်းထဲအထိဝင်သည်ကိုလည်း အားလုံးသိ၏။ ပထမတော့ ဤသတင်းကိုကြားကြားချင်း ဦးခင်မောင်ဝင်းနှင့် ကျနော်တို့ အားလုံး ဒေါသဖြစ်ကြရ၏။ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေကိုချိုးဖေါက်သည့် ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းရီ၏အပြုအမူကို ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ထံ စာရေးပြီးတိုင်ရန် တိုင်ပင်ကြသေး၏။ သို့ သော် မဲများရေတွက်ပြီးသောအခါ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်မှ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စလှယ်လောင်း ဦးခင်မောင်ဝင်းက မဲအပြတ်အသတ်နှင့်အနိုင်ရရှိသည့်အဖြေကိုကြားရသဖြင့် ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းရီအားတိုင်ကြားရန်စဉ်းစားထားသည်ကို ကျနော်တို့ အားလုံး နောက်ဆုတ်ထားလိုက်ကြ၏။ ကျနော်တို့ အောင်ပွဲခံခဲ့ပြီ။ ရထားသည့်အောင်ပွဲနှင့်နွယ်ပြီး နောက်ထပ် မည်သည့်ပြဿနာမျှ မဖြစ်ချင်ကြတော့။
မဲရုံမှ မဲများရေတွက်သည်ကို ဦးခင်မောင်ဝင်းအပါအဝင် လူအတော်များများ ဝိုင်းဝန်းကြည့်ကြ၏။ မဲစာရင်းများရေတွက်နေစဉ် လူတွေအားလုံး ငြိမ်သက်စွာ စေါင့်ပြီးနားထောင်နေခဲ့ရာက မဲအရေအတွက် နောက်ဆုံးသတင်းထွက်လာသောအခါ လူတွေအားလုံး ဆူညံစွာ အော်ဟစ်လိုက်ကြသည်။ လက်ခုပ်လက်ဝါးတီးကာ ကကြခုန်ကြ၏။ တချို့ က ဦးထုပ်များ၊ထီးများ၊ ဖိနပ်များကိုပင် အပေါ်သို့ ပစ်မြှောက်ကာ တက်ကြွနေခဲ့ကြ၏။
ဦးခင်မောင်ဝင်း၏မျက်နှာကို ကျနော်အကဲခတ်သည်။ သူ ဘယ်လိုခံစားနေရသည်ကို ကျနော်သိချင်သည်။ ဦးခင်မောင်ဝင်းက ခတ်ပြုံးပြုံးမျက်နှာနှင့် လူအုပ်၏ဘေးမှလျောက်လာနေ၏။ ကျနော့်ကိုတွေ့ တော့ သူက မျက်နှာကို အားယူပြီး ပိုပြီးပြုံးပြသည်။ ကျနော်က သူမကြာခဏပြောတတ်သည့်စကားတချို့ ကိုသာ နားထဲတွင်ကြားနေခဲ့၏။
“ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကျနော်တို့ အလုပ်တွေ ဆက်လုပ်ကြရမှာပဲ၊ ကျနော့်စိတ်ထဲ မတင်မကျသဘော၊ မဝေခွဲတတ်တဲ့သဘော၊ မရှင်းလင်းတဲ့သဘောတွေ ရှိနေပေမယ့် ပါတီလုပ်ငန်းတွေကိုတော့ မဖြစ်မနေဆက်လုပ်ကြရမှာပဲမို့ လား...”
အမှန်တကယ်အားဖြင့်မူ သူက နိုင်ငံရေးမိုးကောင်ကင်တခုလုံး ညစ်ထေးအုံ့ ဆိုင်းနေသည်ကို ထိုစဉ်ကတည်းက သံသယဖြစ်နေခဲ့သည်ဟု ကျနော်ခန့် မှန်းမိသည်။
ခတ်ပြုံးပြုံးမျက်နှာနှင့်လမ်းလျောက်လာနေသည့် ဦးခင်မောင်ဝင်း၏ ဟန်ပန်မှာ အိပ်မက်ထဲတွင်လမ်းလျောက်လာနေသူနှင့်တူနေသည်ဟု ကျနော်ထင်ခဲ့၏။
“ကံကောင်းလို့ မိုးကတပေါက်နှစ်ပေါက်ပဲရွာလိုက်လို့ ပေါ့၊ နို့ မို့ ရင် ဒီခမောက်ကြီး ဘယ်လိုမှသယ်လို့ ရမှာမဟုတ်ဘူး”
“ရွာတော့လဲဘာဖြစ်လဲကွာ၊ အဲဒါလဲ ရွှေမိုးငွေမိုးသဘောပဲပေါ့၊ ဟ မနက်ဖြန်ကြရင် တမြို့ လုံး ပိတောက်တွေလှိုင်နေတော့မှာသေချာတယ်၊ ဟား ပိတောက်တွေလှိုင်တဲ့နှစ် ခမောက်တွေနိုင်တဲ့ခေတ် ဟုတ်ပါ့ကွား၊ သိတ်ဟုတ် တကယ့်ကိုဟုတ်တာပဲဟေ့”
လူနှစ်ဆယ်ခန် က့ ခမောက်ကြီးကို ဝိုင်းဝန်း မ,ယူ လာခဲ့ကြသည်။ တလမ်းလုံးတယောက်တပေါက် စကားတွေဆူဆူညံညံနှင့်ပြောလာခဲ့ကြ၏။ နေရာလပ်မရှိသဖြင့် ဝင်မမပဲ ဘေးမှလမ်းလျောက်လိုက်ပါလာသူတွေက တွေ့သမျှလူကိုနှုတ်ဆက်ကြ၏။ ခမောက်ကြီးလမ်းအပြည့်ဝိုင်းမလာကြသည့်ကျနော်တို့ ကို လူတိုင်းကလည်း ဝိုင်းဝန်းအားပေး နှုတ်ဆက်သွားကြ၏။
ကားလမ်းနှင့်ရထားလမ်းဖြတ်ရာနေရာအနီးကိုရောက်လာခဲ့ကြသည်။ ရထားတစင်းက ကျနော်တို့ လူအုပ်ကိုတွေ့ ဟန်တူ၏။ ကားလမ်းဖြတ်မည့်သဘော ရထားဥသြသံပေးပြီးမှ တဖြေးဖြေးနီးလာနေ၏။ ကျနော်တို့ လူသိုက်က ခမောက်ကြီး ခေါင်းပေါ် ရွက် မ, ထားလျက်နှင့်ပင် ရထားလမ်းအောက် ကားလမ်းပေါ် ရပ်နေခဲ့ကြ၏။ ရထားတစင်းလုံးလိုလို ပြတင်းပေါက်များမှ ခရီးသည်တွေ ခေါင်းပြူပြီး ထွက်ကြည့်ကြ၏။ တချို့ က ချက်ချင်းသဘောပေါက်ကာ လက်သီးလက်မောင်းတန်း နှုတ်ဆက်လိုက်ကြ၏။ ကျနော်တို့ ကလည်း ပြန်လည်နှုတ်ဆက်လိုက်ကြ၏။
ရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းမကြီးပေါ်ရောက်လာခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့ က လမ်းဘေးသို့ ကပ်ပြီးမှ ခမောက်ကြီးကို သယ်လာကြသည့်တိုင် မောင်းလာသည့်ကားတချို့ က လမ်းဘေးသို့ ဆင်းရပ်ပေးလိုက်ကြ၏။ ကျနော်တို့ ကို ပြုံးပြနှုတ်ဆက်လိုက်ကြ၏။ ထိုစဉ်မှာပင် စစ်သားများအပြည့်တင်ဆောင်လာသည့် စစ်ကားတစီးက ကျနော်တို့ ဘေးမှခတ်ဖြေးဖြေးဖြတ်မောင်း၏။ ကားပေါ်က စစ်သားများကို ကျနော်တို့ ထဲကလူတယောက်က ရုတ်တရက် လက်တဖက်မြှောက်ပြီးမှ အော်ဟစ်နှုတ်ဆက်လိုက်၏။
“ပြည်သူ့ စစ်သား ဒို့ စစ်သား ကျန်းမာပါစေ”
ကားပေါ်ကစစ်သားများမှာ ပထမတော့ ဘာပြန်ပြောရမှန်းမသိပဲ ကြောင်စီစီဖြစ်နေကြသေး၏။ ပြီးမှ ကျနော်တို့ ကို ပြန်လည်ပြုံးပြနှုတ်ဆက်ကာ အောင်မြင်ကြပါစေ ဟု ဆုတောင်းပေးလိုက်ကြ၏။
ကျွဲပွဲမြို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်ရုံးဘေး အဆင်သင့်ပြင်ထားသည့် နေရာတွင် ခမောက်ကြီးကို ထောင်ထားလိုက်ကြသည်။ ရုံး၏မျက်နှာစာနှင့် ထောင်ထားသည့်ခမောက်ကြီးကို ကားလမ်းပေါ်မှ ထင်ထင်ရှားရှားကြီးမြင်နေရ၏။ အောင်ပွဲခံခဲ့ရသည်ရှိသော် မလိုလားအပ်သည့်ပြဿနာများမဖြစ်ပေါ်လာစေရန် အောင်ပွဲခံအခမ်းအနားကို နေ့ ချင်းမလုပ်ပဲထားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသဖြင့် ထိုနေ့ က ရုံးရှေ့ တွင် တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နှင့်ပင် အောင်ပွဲခံခဲ့ကြရ၏။ အထူးသဖြင့် ဦးခင်မောင်ဝင်းက လုံခြုံရေးကို ပိုမိုဂရုစိုက်ရန်အကြံပြုထားသဖြင့် တညနေလုံး တညလုံး ကင်းချပြီးမှ အောင်ပွဲခံကြရ၏။
ညနေ(၆)နာရီခန့် ကားလမ်းပေါ်တွင် လူအသွားအလာရှင်းနေစဉ် မဲရုံမှပြန်လာကြသည့် လူအုပ်တအုပ်ကိုတွေ့ ရသည်။ သူတို့ က တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ(တစည)မှ စည်းရုံးရေးမှူးများဖြစ်ကြ၏။ သူတို့ ရုံးက ကျနော်တို့ အဖွဲ့ ချုပ်ရုံးရှေ့ မှသွားမှသာရောက်နိုင်၏။ တခြားရွေးစရာလမ်းမရှိ။ ထို့ ကြောင့် သူတို့ လည်း မျက်နှာငယ်ငယ်နှင့်ပင် ကျနော်တို့ ရုံးရှေ့ မှလျောက်လာကြ၏။ ရုံးရှေ့ ကိုရောက်တော့ သူတို့ လူအုပ်ကို ကျနော်တို့ အားလုံးလှမ်းကြည့်နေမိကြသည်။ သူတို့ အထဲက လူတချို့ ကလည်း ကျနော်တို့ ဘက်သို့ လှမ်းပြီးအကဲခတ်သလိုကြည့်၏။ အမှန်တကယ်အားဖြင့်မူ သူတို့ က ကျနော်တို့ ၏ အဓိက နိုင်ငံရေးပြိုင်ဖက်များဖြစ်သည်ဆိုသော်လည်း ကျဉ်းမြောင်းလှသည့် ကျွဲပွဲမြို ကလေးထဲ့တွင် နေ့ စဉ်ထိတွေ့ ဆက်ဆံနေကြရသော အသိမိတ်ဆွေများပင်ဖြစ်ခဲ့၏။ ထို့ ကြောင့် ကျနော်တို့ ကလည်း သူတို့ ကို အားနာနေမိသည်။
ထိုစဉ်မှာပင် ဦးခင်မောင်ဝင်းက ရှေ့ ကိုခြေတလှမ်းတိုးရပ်ကာ ထိုလူအုပ်ကိုလက်ပြနှုတ်ဆက်လိုက်လေသည်။
လမ်းပေါ်က တစည စည်းရုံးရေးမှူးများမှာ ရုတ်တရက် လမ်းသွားရပ်လိုက်ကြ၏။ ကျနော်တို့ ဘက်သို့ ပြိုင်တူလိုပင် လှည့်ကြည့်ကြသည်။ ပြီးတော့ ဇာတ်တိုက်ထားသလိုပင် သူတို့ အားလုံးပြန်လည်နှုတ်ဆက်လိုက်ကြလေသည်။
ပင်ပမ်းနွမ်းနယ်နေသောမျက်နှာနှင့် ဦးခင်မောင်ဝင်းက လမ်းပေါ်ကလူအုပ်ကို ပြန်ကြည့်နေသည်။ပြီးတော့ အမှတ်မထင် မိုးကောင်းကင်ကို မေါ့ကြည့်၏။ ထို့ နောက် ကျနော့်ဘက်သို့ လှည့်ကာ စကားတခွန်းပြောလိုက်လေသည်။
“မိုးသားတွေ မဲနေပါလားဆရာရေ၊ နိုင်ငံရေးရာသီဥတုကတော့ တကယ့်ကို မှုံမှိုင်းနေတာပဲဗျနော”
ကျနော်က သူ့ စကားကိုသဘောတူကြောင်း ခေါင်းညိမ့်ပြီးပြလိုက်မိလေသည်။ ။
(ဦးခင်မောင်ဝင်းမှာ အုတ်တွင်းမြို အမှတ်(၂)့မဲဆန္ဒနယ်၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်၊ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၉၂ ခုနှစ်တုန်းက သူ့ ကို စစ်အစိုးရက ချဲမှုနဲ့ မတရားအမှုဆင်ပြီး ထောင်ချခဲ့လို့ထောင်ထဲမှာ (၁၀)နှစ်နဲ့ (၁၅)ရက်နေပြီးမှပြန်လွတ်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၆ ခု၊ မတ်လ (၃၁)ရက်နေ့ မှာ သူ့ ကို စစ်အစိုးရက ထပ်မံဖမ်းဆီးပြီး နှစ်(၂၀)ထောင်ဒဏ်ချပြန်ပါတယ်။အခုဆိုရင် ဦးခင်မောင်ဝင်းဟာ အမျိုသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ် ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ထဲမှာ ထောင်ဒဏ်အများဆုံးချမှတ်ခံရတဲ့ပုဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆောင်းပါးဟာ အကျဉ်းချခံနေရတဲ့ အဲဒီပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးခင်မောင်ဝင်းကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ ရေးတဲ့ဆောင်းပါးဖြစ်ပါတယ်။)
Posted by ငြိမ်းဝေ at 11:35 PM
tin min htet January 16, 2010 at 6:09 AM
ကျေးဇူးပါပဲ .. ကိုငြိမ်းဝေ
ရန်ကုန်က ရွေးကောက်ပွဲ ညကိုတောင် သတိရသေးတယ်။ လမ်းပေါ်မှာ လူအုပ်ကြီးက မဲသတင်းနားထောင်နေကြပြီး၊ ဘယ်မြို့နယ်မှာ ဘယ်သူနိုင်သွားပါပြီ ဆိုရင် လက်ခုတ်တွေ တီးလိုက်ကြနဲ့။ ဒေါက်တာအောင်ခင်ဆင့်၊ ဆရာကြီး မင်းသုဝဏ် စတဲ့ သူတွေ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ် နိုင်ခဲ့သေးတာ မှတ်မိသေးတယ်။
ကိုပေါ January 16, 2010 at 5:06 PM
လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၂၀ က ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ မပြီးဆုံးသေးတဲ့ ခရီးကို အမှတ်တရ ဖြစ်စေတဲ့ ဆောင်းပါးပါ ဆရာငြိမ်းရေ။ အဲဒီတုန်းက ကျနော်က အင်းစိန်မှာ သန်းခေါင်စာရင်းပေါက်နေတဲ့အတွက် အင်းစိန်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)က မဲရုံမှာ ခမောက်ဆောင်းပြီး သွားမဲပေးခဲ့တာကို သတိရမိသေးတယ်။
ငြိမ်းဝေ January 16, 2010 at 5:30 PM
ကျနော် ဒီဆောင်းပါးလေးရေးချင်တာ ကြာပါပြီ။
အေးဗျာ တကယ့်ကို တမျိုးသားလုံးနဲ့ ချီပြီး စေါ်ကားခံလိုက်ရတယ်လို့ ကို ကျနော်ခံစားရပါတယ်။ ဒါကတော့ ကျနော့်အမြင်ပါနော်၊ ခင်ဗျားတို့ လာလည်ကြတာ တကယ်ကျေးဇူးတင်တယ်။
ကိုပေါ January 16, 2010 at 8:04 PM
ကျနော်လည်း ထပ်တူထပ်မျှပဲ ခံစားရပါတယ်ဗျာ။ တကယ်တော့ တကြိမ်တည်း စော်ကားခံရတာတောင် မဟုတ်ပါဘူး။ ၈၈ က စပြီး ရေတွက်ရင်တောင် အာဏာသိမ်းကတကြိမ်၊ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို အသိအမှတ်မပြုတာကတကြိမ်၊၊ ဒီပဲယင်းလုပ်ကြံမှု၊ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး၊ နာဂစ်၊ လူထုဆန္ဒခံယူပွဲ စသဖြင့် အကြိမ်ကြိမ် စော်ကားခဲ့ပါတယ်။
Sint Si January 16, 2010 at 10:24 PM
Sint Si January 17, 2010 at 4:01 PM
I remember that day too. It was so excited to listen radio at night as well.
ရွှန်းလဲ့ March 25, 2010 at 8:40 AM